golaha Network - Shiinaha Chao Yu Makiinado
Wall golaha wasiirada
Hayayaasha Meegaarka Open
Golaha Network, taas oo waxaa loo isticmaalaa in la isu geeyo guddiga sii kordhaya,, sanduuqa fur-in ay fur-in, qayb ka elektaroonik ah, qalabka iyo meelaha farsamo oo ka kooban, sidaa darteed sida in la sameeyo sanduuq rakibo. Sida laga soo xigtay nooca hadda, golaha server, golaha derbi, golaha network, golaha wasiirada ee caadiga ah, caqli nooca albaabka golaha wasiirrada dibadda iyo wixii la mid ah. Qiimaha Capacity u dhexeeya 42U iyo 2U.
qaab-dhismeedka Simple, hawlgalka ku haboon, sancada fiican, size saxda ah, dhaqaale iyo wax ku ool ah;
- caalamiga ah galaas caan hagaajiyey cad albaabka hore,
Jir sare rito hawo wareeg ah;
Isla mar ahaantaana, rakibi wheel iyo cagaha taageeraya;
- buuxiso accessories optional.
golaha network wuxuu ka kooban yahay qaab dhismeedka iyo cover (albaabka), taas oo guud ahaan uu leeyahay qaab qaab, oo waxaa la dhigayaa on dhulka. Waxay bixisaa jawi ku habboon iyo ammaanka hawlgalka caadiga ah ee qalabka elektarooniga ah. Tani waa kaliya ka dib markii shirkii heerka nidaamka. Golaha wasiirrada aan lahayn qaab-dhismeedka xiran waxaa loo yaqaan jir ah.
golaha network Early inta badan by shubay ama xagal dhex fur ah, rivet xiran ama welded galay jir ah golaha wasiirada, iyo laga sameeyey oo khafiif ah saxan bir cover (albaabka) iyo. Noocan ah golaha wasiirada waa weyn, weyn, fudud, ayaa lagu reebay. Iyadoo la isticmaalayo transistors, wareeggeedii isku dhafan iyo qaybaha kala duwan, qalabka ee isafgaradka aalladda, qaab-dhismeedka Golaha Wasiirada ayaa sidoo kale waa yar yahay, dhismaha blocks of jihada horumarka. Golaha network ayaa la sameeyey galay taxane ah oo fur oo godka la size gaar ah. Geli sanduuqa, furaysto-in nidaamka shirka of heshiis siman oo toosan ee laba qaybood. Wax golaha Shabakadda guud ahaan isticmaalaa waslad khafiif ah steel, nooc kasta oo ka mid qaybta steel qaybta qaabka, profile aluminium iyo bacyaal kala duwan injineernimada, iwm .. In
waqti Post: Jan-17-2018
NO.268 Danyang Road, Xiangshan Zone Horumarinta Dhaqaalaha, Ningbo City, Gobolka Zhejiang, Shiinaha
hadda na soo wac: +86 0574 65003787